ဗိုလ်ချူပ် ကို မြင်ချင်ရင်..။
ဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့် အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ် မရှိတော့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ဗမာတနိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ရေးရရှိစေနိုင်ရန် ရဲဘော်သုံးကျိပ် ကိုဦးဆောင်၍ လက်ရုံးရည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရုံမက ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့တွင် အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်နဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တပြည်လုံးညီညွတ်ကြောင်းပြဆိုနိုင်သည့် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ် ဆို၍ နှလုံးရည်စွမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းခဲ့သောကြာင့်သာ ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ရက်၊နံနက် ၄နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ဗမာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ အမြင်အရဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဟာ လူတဦးထဲက ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲနှင့် အဖွဲ့နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ရ မယ်၊ အဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒ မဟုတ်ပဲ ငါ့ဆန္ဒ ငါ့သဘောလုပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးမ ဟုတ်ပဲ အဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒယူပြီး အဖွဲ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု မျိုး ဖြစ်ရမယ်။
လူမျိုးရေးတရားဟာလဲ ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး တခြားလူမျိုးတွေဟာ ငါ့လောက်မမြတ်၊ ငါ့လူမျိုးသာ ကမ္ဘာမှာကြီးစိုးရမယ် ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းသေး သိမ်တဲ့ လူမျိုးရေးတရား မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ချစ်ခင်သော်လဲ တခြား လူမျိုးများကို မုန်းတီးခြင်း၊ အထင်သေးခြင်း မဖြစ်ပဲ ကမ္ဘာမှာ တိုင်းပြည်အချင်း ချင်း သင့်မြတ်စွာ တဦးအကျိုး တဦး ဖြစ်ပွားစေအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ လူ မျိုးရေးတရားမျိုးလဲ ဖြစ်ရမယ်၊ ဂျပန်ပြည်မှာလို စစ်ဘက်က လက်ဝါးကြီးအုပ် ပြီး တိုင်းပြည်လွှတ်တော်က ဘာမှအစိုးမရတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဝါဒမျိုးမရှိရ အောင် စစ်ဘက်ကို တိုင်းပြည်လွှတ်တော်က အုပ်စိုးနိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။
နောက် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့်၊ အစည်းအဝေးခေါ် ခွင့်နှင့် စီတန်းလမ်းလျောက်ခွင့်၊
လွတ်လပ်စွာ တွေးတောခွင့်၊ ကိုးကွယ်လိုရာဘာသာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ တရားနှင့်မညီသော အဖမ်းအဆီး
ချင်သော်လဲအလုပ်မရနိုင်၍သော်၎င်း အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းမပြုစွမ်းနိုင်သူများသည်အစိုးရ၏
အထောက်အပံ့ကို ရရှိခွင့်ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတွေလဲ ရှိရမယ်။
နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်၊ ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ တပ်မတော်ကလည်း ယုံကြည်တယ်။
ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာညီညွတ်ရေးဟာအခုအဓိကလုပ်ငန်းပဲ။ညီညွတ်ရေးဆိုပေမယ့်တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးနှင့် ထူထောင်ရေးကို အထက်ပါ အခြေခံအချက်တွေအရ ဆောင်ရွက်မဲ့ ညီညွတ် ရေးမျိုးကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်၊ ရာထူးဝေစားရုံသာဖြစ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးမျိုး၊ ရွေကောက်ပွဲ ချိန်ပြီး ငြမ်းဆင်တက်ရုံလောက် တက်နိုင်အောင် ညီညွတ်ရေးမျိုး ဆိုရင်တော့ ဘယ်နည်းနှင့်မှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။”
ဤစကားများကိုဗိုလ်ချုပ်သည်စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးတွင်ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းပါ ရှေ့ဆက်ရမည့် မူဝါဒဆိုင်ရာစကားများ ဖြစ်သည်။ထို မူကိုအဓိကထား၍ “ညီညွတ်ရေး ဆိုပေမယ့် တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးနှင့် ထူထောင်ရေးကို အထက်ပါ အခြေခံအချက်တွေအရ ဆောင်ရွက်မဲ့ ညီညွတ်ရေးမျိုးကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်” ဟူသော စကားအတိုင်း ညီညွတ်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြခြင်း၊ (ဒီသဘောမျိုးစကားကို ကျွန်တော့အဖိုး ကို ပြောဖူးပါသည် ထိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်မရှိတဲ့ နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ထူထောင်ရေး အတွက် ငါတို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကွ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေဝင်း မွှေလို့ တိုင်းပြည်ကြေ ရတာကွ လို့တုံ့ပြန်တော့ ဒါဆို တိုင်းပြည်ကြေအောင် လုပ်တဲ့အထဲမှာ အဖိုး လဲပါတာပေါ့ ဆိုတော့ ဘာကွ ဆိုပြီး ထအော်တော့… ဟုတ်တယ်လေအဖိုးလဲ သူပေးတဲ့ရာထူးယူပြီး သူခိုင်းတာလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့မှ အေး… ဆိုပြီး အဝေးကိုငေးပြီး တွေးနေတော့တာကြုံဖူးထားလို့)
နှင့်မှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟူသောစကားနှင့်ကိုက်ညီရုံမက နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။
ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မမူမီ အရှင်အာနန္ဒာအမှူးပြုသော ရဟန်းငါးရာကို မြတ်ဗုဒ္ဓက ယော
ဝေါအာနန္ဒမယာဓမ္မောစဝိနယောစဒေသိတောပညတ္တောသောမမစ္စယေနသတ္ထာ=ချစ်သား အာနန္ဒာသင်တို့အတွက်ကျင့်ရန်တရားနည်းလမ်း၊လိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုထုတ်ဖော် ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်၊အဲဒီတရားနည်းလမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာငါမရှိတဲ့အခါသင်တို့ရဲ့ဆရာ ပါပဲဟုဟန္ဒဒါနိဘိက္ခဝေအာမန္တယာမိဝေါဝယဓမ္မာသင်္ခါရာအပ္ပမာဒေနသမ္ပာဒေထဟူသောနောက်ဆုံး စကားမပြောမီလေးမှာအတိအကျညွှန်ပြခဲ့လေသည့်အားလျှော်စွာကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောတပည့်သား သံဃာတော်တို့လည်းတရားနည်းလမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ကိုဆရာထားကာကျင့်ကြံတော်မူခဲ့
အဓိကမထားပဲ လူအဓိကစနစ် ကျင့်သုံးခဲ့သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
မရှိတာထက် မသိတာခက်တယ် (ရှိပါလျက်နဲ့ မသိတာပိုခက်တယ်)။
မသိတာထက် မလုပ်တာခက်တယ် (သိပါလျက်နဲ့ မလုပ်တာပိုခက်တယ်)။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, January 23, 2010 Links to this post
လူမျိုးခြားအချင်းချင်း ဘာသာခြားအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဓါတ်ပုံနှစ်သိမ့်ဆု မြန်မာမှ ရရှိ။
ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူး၍ အာရှ-ဥရောပ တွေ့ဆုံမှုအဖွဲ့(ASEM)၏ လူမျိုးခြားအချင်းချင်း ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံလက်ရာသည် နှစ်သိမ့်ဆုအဖြစ် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခံရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
La Minn Naing "Yes, We Believe in the Interfaith Dialogue" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအနှံ့မှ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲဝင်စေခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓာတ်ပုံလမင်းနိုင် (People မဂ္ဂဇင်း) ၏ ဓာတ်ပုံလက်ရာသည် နှစ်သိမ့်ဆုအဖြစ် ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းနှစ်သိမ့်ဆုရ ဓာတ်ပုံမှာ ဆူးလေးဘုရားနှင့် လမ်းတစ်ဖက်ရှိ ဗလီကို ယှဉ်တွဲရိုက်ပြထားသော ပုံဖြစ်ပါသည်။
ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းမှာ လူမျိုးတူချင်း ဘာသာတူချင်းတွေသာမက လူမျိုးခြားချင်း ဘာသာခြားချင်း ဖြစ်စေကာမူ အေးချမ်းသာယာစွာ အတူလက်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြပြီး အမိမြန်မာပြည်ကြီး သာယာတိုးတက်ဖို့ အတွက် ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေသူများ ပပျောက်ကြပါစေသား။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူတင်ပါသည်.။
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ယနေ့ မနက် (၆) နာရီ (၄၀) မိနစ်ခန့် က ဂျက်တိုက်လေယာဉ် F7 Fighter ပျက်ကျသွားပါတယ်။
တရုတ်လုပ် ဂျက်တိုက်လေယာဉ် F7 Fighter အမျိုးအစားဟာ ရန်ကုန်လေဆိပ်အဆင်းမှာ ပျက်ကြသွားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပျက်ကျရခြင်း အကြောင်းရင်းကိုတော့ မသိရသေးပါဖူး။
ဒီလေယာဉ်အမျိုးအစားဟာ တစ်ယောက်မောင်း တိုက်လေယာဉ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးပြောတာကတော့ ဒီလေယာဉ်ကို လေ့ကျင့်မောင်းနှင်နေစဉ် လေဆိပ်ကို ပြန်အဆင်းမှာ ဖြစ်တာလို့ ပြောပြပါတယ်။ ပိုင်းလော့ ပြည့်ဖြိုးမျိုး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
သုံးသပ်သူတစ်ဦးပြောတာကတော့ ဒီ ပျက်ကျတဲ့လေယာဉ်ဟာ နအဖကနေ တရုတ်ထံကနေ ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့ အစီး (၃၆) စီးထဲက တစ်စီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုသုံးသပ်ပါတယ်။
ဒီလို ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ပျက်ကြခဲ့ဖူးတာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တုန်းကလည်း မန္တလေးလေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ကွင်းကနေ ပျံတက်စမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် လေယာဉ်မှူး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
နအဖဟာ လေယာဉ်တွေဝယ်ဖို့လောက်ဘဲ သိပြီး လေယာဉ်တွေအကြောင်း၊ လေယာဉ်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းစနစ်၊ လေယာဉ်ကွင်းနဲ့ လေယာဉ်ပြေးလမ်း အဆင့်အတန်း၊ လေယာဉ်မောင်းနည်းပညာနဲ့ လေယာဉ်မှူးတွေ ပြည်စုံစွာ လိုအပ်တဲ့ လေကျင့်သင်ကြားမှုနည်းပညာတွေကို မသိနားမလည် မဆောင်ရွက်တာကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ ခရီးသည်လေယာဉ်တွေတင်မက အခုလို စစ်လေယာဉ်တွေပါ ပျက်ကျမှုတွေ ဖြစ်ရတာပါ။ နှမျောစရာကတော့ လေယာဉ်ပျက်ကျလို့ မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးကြရတဲ့ လေယာဉ်မှူးတွေနဲ့ ခရီးသည်တွေပါဘဲ။ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွေကိုလည်း တိကျခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေ ထုပ်ပြန်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အသိပေးမယ် သတိပေးမယ်ဆိုတာထက် သတင်းအမှောင်ချပြီး သူတို့ပေါ့ဆမှုတွေကို ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့သာ ဦးစားပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဆိုးရွားတာကတော့ လေယာဉ်ဝယ်ရပြီးရော ဈေးပေါပေါနဲ့အချောင်ရ အချောင်ဝယ်၊ အရည်အသွေးကျနေတဲ့ လေယာဉ်တွေကို ၀ယ်တဲ့သူကလည်း ၀ယ် ရောင်းတဲ့သူကလည်း ရောင်းနဲ့ဖြစ်နေတာပါဘဲ။ ကြားထဲက အသက်ပေး ခံရသူတွေကတော့ ခံရတာပါ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 22, 2010 Links to this post
သင် သေသွား ခဲ့သော် ...
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ ချမ်းသာပြီး လောဘကြီးတဲ့ လယ်ပိုင်ရှင်ကြီး တစ်ယောက် ရှိပါတယ်.. တစ်နေ့တော့ သူ့ထက်ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီး တစ်ယောက်က လယ်ပိုင်ရှင်ကြီးကို ငါပိုင်တဲ့ မြေတွေထဲမှာ မနက်ကနေစပြီး လမ်းလျှောက်သွားလို့ ညနေ နေ၀င်ချိန်မှာ စလျှောက်သွားတဲ့ နေရာကို ရောက်အောင် ပြန်လာနိုင်တဲ့ မင်း လျှောက်နိုင်သလာက် မြေကြီးကို ငါပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်..ဒါနဲ့ လောဘကြီးတဲ့ မြေပိုင်ရှင်ကြီးကလဲ သူ့မှာ မြေတွေအများကြီး ရှိနေပါရက်နဲ့ မတော် လောဘတက်ပြီး အလကား လိုချင်တော့ မနက် စောစောထပြီး အဲဒီမြေနေရာကို သွားပါတယ်.. ပြီးတော့ စမှတ်တစ်ခုကို မှတ်သားထားပြီး ၄င်းနေရာကနေ လမ်းစ လျှောက် ပါတယ်.. ဖြေးဖြေး လျှောက်ရင် နေရာများများ မရမှာ စိုးတဲ့အတွက် လယ်ပိုင်ရှင်ကြီးဟာ အပြေးတစ်ပိုင်း လမ်းလျှောက် ပါတယ်.. မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် လျှောက်ပါတယ်.. ။
သူဟာ မောပန်းလွန်းနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း အနားယူဖို့၊ ရပ်တန့် ပစ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူး မရှိပါဘူး.. သူ့ဘ၀မှာ အခုထက် ပိုပြီး ကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာဖို့ ဒီတစ်ခါသာရတဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ် မခံချင်တဲ့အတွက် မရပ်မနား လျှောက်နေဆဲပါ…..နေ့လည်စောင်းလာတော့ သူ့ကိုယ်သူ ခရီးတော်တော်များများ ပေါက်ခဲ့ပြီ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်.. နေ၀င်ချိန် အမှီလဲ စ မှတ်ကို ပြန်ရောက်ရဦးမယ် ဆိုတော့ သူ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်.. သူ့လောဘစိတ်ရဲ့ စေ့ဆော်မှု ကြောင့်သာ ဒီလောက် အကွာ အဝေးကို သူလျှောက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. သူနောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်လျှောက်ရင်း မျက်လုံးက နေကိုသာ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ပြီး လျှေက်လာပါတယ်.. ။
နေ၀င်ခါနီးလေ မြန်အောင်ပြေးလေ.. နေ၀င်ခါနီးလေး မြန်သထက် မြန်အောင်ပြေးလေ ပါဘဲ.. နေ၀င်သွားလို့ သူစလျှောက်ခဲ့တဲ့ နေရာကို မရောက်ရင် ဒီမြေတွေကို သူရမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလေ.. ဒီတော့ ပြေးရင်းပြေရင်း မောပန်းလွန်းလို့ အသက် တောင် မရှူနိုင်အောင် ဖြစ်လာပါတယ်..နောက်ဆုံးတော့ သူစလျှောက်တဲ့ နေရာလဲ ရောက်ရော မြေပိုင်ရှင်ကြီးဟာလဲ အမောဆို့ပြီး လဲကျသွားပါရော.. နေ၀င်ချိန် မတိုင်ခင်မှာတော့ အစကို ပြန်ရောက်ခဲ့ပါရဲ့.. သို့သော်လည်း အမောဖောက် နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး အဲဒီနေရာလေးမှာဘဲ သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်..သူသေသွားတော့ အဲဒီသူပိုင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ မြေကြီးမှာဘဲ လူတွေက သူ့ကို မြုပ်နှံ လိုက်ကြပါတယ်.. မြေပိုင်ရှင်ကြီး သေတော့ နောက်ဆုံး လိုအပ်တာ၊ သူပိုင်သွားတာက သူ့တစ်ကိုယ်စာ မြုပ်နှံဖို့ ခြောက်ပေအရှည် မြေကွက်လေး တစ်ကွက်မျှသာ။
…ကဲ သင်သေသွားတဲ့ နောက် ဘယ်လိုပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးက သင့်နောက်ကို လိုက်ပါသွားပါသလဲ….
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နေအိမ် ပြင်ဆင်ရေး တရားဝင် ကန့်ကွက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျဉ်းကျရင်း နေထိုင်ရာ နေအိမ်မှာ ယိုယွင်းပျက်စီး နေတာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ စီစဉ်နေတာကို ဒီအိမ်ကို အမွေခံယူထိုက်ကြောင်း လျှောက်ထားတဲ့ အကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်က တရားရုံးမှာ တရားဝင် လျှောက်ထားလိုက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလထဲမှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရစဉ် ကာလမှာပဲ နေအိမ်ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဒီဇင်ဘာလဆန်းကစလို့ ပြင်ဆင်မှုတွေ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း အမွေဆိုင်အဖြစ် ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်က ကန့်ကွက်ရာကစလို့ ရပ်နားထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံး တရားဝင် ကန့်ကွက်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှေ့လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က အမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်နဲ့ ခြံဝန်းကို အကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦးက
အဲဒီသက်သေတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ခွင့်ရှိဖို့ လိုတယ်။ တွေ့ခွင့်ရှိလာရင် ဒီအမှု ဆက်ပြီး Proceed လုပ်သွားမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြမယ့် သက်သေတွေ စစ်ဖို့ကိစ္စ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ Right ရှိတယ်။ သူ့သက်သေတွေနဲ့ သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်၊ Instruction ယူရမယ်၊ Instruction ပေးရမယ်။ အဲဒါကို မလုပ်နိုင်သေးတော့ တရားရုံးကပဲ ဖော်ပြရန်ချိန်းပေါ့၊ ဗမာလိုသုံးတာတော့၊ Mention date နဲ့ သွားနေတာ။ဆက်မတိုးသေးဘူးပေါ့၊အမှုက။အဲဒီမှာခေတ္တဆိုင်းငံ့နေတဲ့သဘော။”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဥာဏ်ဝင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ FM ကို (၂၄) နာရီပတ်လုံး Online မှ စတင်ထုတ်လွှင့်..
ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဘလော့တွေ၊ မေးလ်တွေ ဘယ်ကလာသလဲ။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်တီးနေတာတွေကို သတိမူကြပါ။
“လူတစ်ယောက်အနေနှင့် မိမိတစ်စုတစ်ဖွဲ့၏ အတွေးအခေါ်အယူအဆကို လေးစားကြည်ညို
ယုံမျှနှင့် မပြီး။ အခြားတစ်ပါးသောသူများ၏ အတွေးအခေါ်အယူဆများကိုလည်း ကျိုးကြောင်း
ခိုင်လုံမှု မရှိပဲ ဝေဖန်နှိပ်နှယ်ခြင်း မပြုသင့်” ။ (အသောကကျောက်စာ) ။
“မတူသော အယူအဆများ ညှိနိုင်းဆွေးနွေးကြရာတွင်၊ အစဉ်အလာကြောင့် အယူများအပေါ်
အားပြုသည်ထက်၊ဆင်ခြင်တုံတရားကိုရှေ့တန်းတင်သည်ကလူမှုရေးသဟဇာတမျှမှုကို ပိုမိုဦးတည်စေနိုင်လိမ့်မယ်” ။ (အက္ကဗာနန်းရင်ပြင်တွင် ဘာသာပေါင်းစုံ နှီးနောဖလှယ်ပွဲ
ကျင်းပပေးခဲ့သော အက္ကဗာမူဆလင် ဘုရင်ကြီး)။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ကောက်နှုတ်ချက်စကားတွေကို ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒီဘုရင်နှစ်ပါးဟာ ကိုးကွယ်
တဲ့ ဘာသာတရားတွေ မတူကြပါဘူး၊ တစ်ပါးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီး၊ တစ်ပါးက မူဆ
လင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတာပါ။ သို့သော်လည်း သူတို့ သဘောထားတွေကို ကြည့်ခြင်း
အားဖြင့် အချင်းချင်း လေးလေးစားစား အတူယှဉ်တွဲနေနိုင်ရေးကို အထူးလိုလားကြတယ်ဆို
ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာလည်း တက္ကသိုလ်တွေကနေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာတွေကို ညှိနိုင်းဆွေး
နွေးတဲ့ ပြဌာန်းစာတွေ သင်ကြားပို့ချပြီး၊ လက်မှတ် certificate တွေ၊ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေ ပေးနေ
ပါပြီ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လင့်ခ်တွေကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရားတွေ
သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဒီနေ့ကမ္ဘာက သင်ကြားပေးနေပါပြီ။
ဦးဇင်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဘာသာတရားတွေ အချင်းချင်း မတဲ့အောင်၊ တစ်ဖွဲ့နဲ့  တစ်ဖွဲ့ 
မတည့်အောင် ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ မီးမွေးနေကြတာပါ။ နအဖက သူတို့ နိုင်ငံရေးအကြပ်တည်
ဖြစ်တိုင်း မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို
ရန်တိုက်ပေးတာပါ။ ဒါကို ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ နအဖက လက်နှက်တစ်ခုသဖွယ် အသုံးပြု
မန္တလေးမြို့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကို စစ်အစိုးရက ဘုရားဝမ်းဗိုက်ဖောက်ကာ ဌာပနာ
တွေကိုယူတာ ပြည်သူတွေသိသွားတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ကုလား - ဗမာအဓိကရုဏ်းလုပ်
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ) အဖမ်းခံရတုန်းက အဖြစ်ပျက်တစ်ခုကို ပြန်
ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဦးဝီရသူ အဖမ်းခံရတော့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က သံဃာတွေဟာ ဆန္ဒပြဖို့
ညကြီး ထွက်လာကြပါတယ်၊ မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်းက သံဃာတွေကို ထွက်လာဖို့ ဆန္ဒ ပြဖို့ 
အစပြုတဲ့ သံဃာတွေက ခေါ်နေတုန်း၊ ဒီတီ DT ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဒကာ တစ်ယောက် ကလည်း
သံဃာတွေထွက်လာဖို့ ၀ိုင်းစည်းရုံးပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေ
မှာ စစ်တပ် ချထား ပြီးပါပြီ။ သက်တော် ကြီး သံဃာ တစ်ပါး ကဒီ ဆိုင်ကယ် ဘယ်လို လုပ်
ကျောင်းဝန်းထဲ ၀င်လာတာလည်း ဖမ်းစမ်းဆိုပြီး ဖမ်းခိုင်းတော့ အဆိုပါ ဆိုင်ကယ် သမား
ဒီဆိုင်ကယ်သမားကို သိလားဟေ့လို့ မေးတော့ သံဃာတစ်ပါးက မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က ဘုန်းကြီး
ဦးဝါသေဋ္ဌ ကားမောင်းတဲ့ကောင်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကြားထဲမှာ ထောက်လှမ်းရေး
ထည့်ထားတာပါ။အဲဒီ ညဆန္ဒပြပွဲ မှာ စစ်တပ်က ပစ်လိုိ့ရင် တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူခဲ့ ပါတယ်၊
သံဃာတစ်ချို့လည်းဆေးရုံရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီဆိုင်ကယ်သမား (ကားသမား) ဟာ
ခင်ညွန့်တပည့်ဆိုတာ သံဃာတွေ အားလုံးက သိသလို၊သူနေတဲ့ရပ်ကွက်ကလဲသိနေပါတယ်၊
ခင်ညွန့်ပြုတ်တော့ သူလည်း ငုတ်တုပ်၊ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ၊ လူ့အမုန်းခံဘ၀မှာ ရောက်နေရှာ
တော့တယ်။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က ဘုန်းကြီးတွေနားမှာ ကပ်နေတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပေါ်
အာဏာရှင်တွေ၊ နယ်ချဲ့တွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံရေးအကြပ်တည်းတွေဖြစ်တိုင်း လူမျိုးရေး သွေးခွဲ
တာတွေ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လုပ်တာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာတစ်ခုပါ။
အင်္ဂလ်ိပ်လက်ထက်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လက်ထက်မှာလည်း နယ်ချဲ့ ကအင်္ဂလိပ်က၊
ကုလား - ဗမာ အဓိက ရုဏ်း ဖန်တီး လိုက်လို့ ကျောင်းသားတွေ ငြိမ်အောင် အဲဒီတုန်းက
သမ္မတလုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာဘမော်ကို ခေါ်ပြီး မိန့်ခွန်းပြော ထိန်းခိုင်းခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ဘူး
ပါတယ်။ ယခုအာဏာရှင်တွေက ဒီလို လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်း၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း
ဖြစ်အောင် ပိုဖန်တီးလေ့ ရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထူးဝိသေသပြုထားတာတောင်မှ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာ
ယကလို အဖွဲ့မျိုးတွေဖွဲ့ပြီး သံဃာတော်အချင်းချင်း ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခိုင်းထားတာပါ၊ ယနေ့ သံဃာ
တွေတိုင်းတပါးမှာ ထွက်ပြေးနေရတာတွေ၊ ထောင်တွေမှာ အကျဉ်းကျ နေတာတွေ၊ ရဲဘက်
အလုပ်စခန်းတွေမှာ အနှိက်စက်ခံနေရတာတွေ၊ အလုပ်ကြမ်းတွေ လုပ်နေရတာတွေ၊ စစ်ကြော
ရေးတွေမှာ လူမဆန်စွာ စနစ်တကျ နှိပ်စက်ခံနေတာတွေကို နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက
သံဃာတွေကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်နေတဲ့ သံဃာ့အာဏာရှင်အသွင်တောင် ပိုဖြစ်ပြနေပါတယ်။
အာဏာရူးအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ မဟာသံဃာ့ အဖွဲ့စည်းကြီး
ဆိုတာဒီနေ့သာမန်လူတွေတောင်နားလည်လာပါပြီ။သံဃာထုရဲ့ဘ၀တွေကိုဘာလုံခြုံမှုမှ မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလည်း သိလာပါပြီ။ နယ်က တောက အဖိုးအဖွားတွေအတွက် မြို့
ပေါ်တတ် စာသင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မြေး ကိုရင်၊ ဦးဇင်းတွေ အန္ဒရာယ်ဖြစ်မှာ စိတ်မချ ရတဲ့
အာဏာရူးတွေ မတရားအုပ်ချူပ်လာနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အာဏာ
ရှင် မဆလ န၀တ နအဖတွ အကွက်ဆင် ဖန်တီးခဲ့လို့တရုတ် - ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြလို့ ၊
ကုလား - ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြလို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်း သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတာတွေ
အာဏာရူးတွေဟာ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားအချင်းချင်း သွေးခွဲလှုံ့ ဆော် ပြဿနာဖြစ်အောင်
လုပ်ရုံမက ဘာသာတူ လူမျိုးတူအချင်းချင်းလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်မှု နည်းအောင်
ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ယုတ်မာစွာ လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ယနေ့ပြည်သူတွေ သတိမူ ဂရုစိုက်
ကြဖို့လိုပါတယ်။ မူဆလင်နဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အချင်းချင်းကြားထဲ လုပ်ကြံ
သွေးထိုး ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာဏာရူးတွေ ဆင်တဲ့ ထောင်ချောက်အကွက်ထဲ မ၀င်သွား
အောင် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းက သတိ အတော့်ကို ထားရမှာပါ။
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ကမှန်းမသိဘဲ မိမိဘာသာ မိမိလူမျိုးကို ဆန့် ကျင်စော်ကားတဲ့ အပြော
တွေစာတွေ ကြားရ မြင်ရ ဖတ်ရတာနဲ့ချက်ချင်း ခံစားမှုတွေပေါ်လာပြီး အလျင်စလို တုန့် ပြန်
မိတာတွေဟာ အာဏာရူးတွေ ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်အကွက်ထဲ အလွယ်တကူ ၀င်သွား
မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင် သတိထားဖို့ ကတော့ ဒီလိုစော်ကားဆန့် ကျင်ပြော
ဆိုရေးသားသူတွေရဲ့အပြောတွေ အရေးသားတွေကို ကြားရ မြင်ရ တဲ့အခါမှာ စိတ်ကို တည်
ငြိမ်အောင်ထားပြီး ဒီလိုအပြောအဆိုအရေးအသားတွေ စတင်လာခဲ့တဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို စုံစမ်း
ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးမှာဘာသာရေးမှာဦးဆောင်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာမိမိတို့လူမျိုး ဘာသာဝင်တွေကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ မပြောဆိုကြဖို့မလုပ်ကြ
ဖို့ ထိန်းသိမ်းရင်းပြဿနာရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေကို ဖေါ်ထုတ်ကြရမှာပါ။
ယခုတစ်လောမှာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေ အီးမေးလ်တွေမှာ စီဘောက်ထဲမှာ ဘာသာ
တရားတွေကို ဆန့် ကျင်စော်ကားတဲ့ ရေးသားမှုတွေ ရုတ်ချည်းပေါ်ထွက်လာတာဟာ မသ
င်္ကာဖွယ်ဆိုတာ သတိထားကြရပါမယ်။ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်အောင် ဖန်တီး
တဲ့နေရာမှာ ဖန်တီးကြသတွေဟာ သူတို့ အချင်းချင်း လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ သာမန်လိမ်လည်မှုတွေမှာ တွေ့ ရတဲ့ပုံစံနဲ့ လည်း တူပါတယ်။ တစ်ဦးက ဆန့် ကျင်
ဘက်စကားပြောမယ် နောက် သူတို့ လူတစ်ဦးက ပြန်ပြီးတုန့် ပြန်ပြမယ်၊ ဒီလိုနဲ့ကျန်တဲ့
သတိမထားမိသူတွေ ခံစားမှုပြင်းတဲ့သူတွေ ပါလာအောင် ဆွဲခေါ်ပါတော့တယ်။ ဒီအတွက်
သာမန် ခံစားမှုနဲ့ ပြောသူတွေပါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီး ကြီးမားတဲ့ အခြေအတင်စကား
များရာကနေ နောက်ဆုံး အုပ်စုလိုက် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်ကြပုတ်ကြ သတ်ကြဖြတ်ကြ
တဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
အင်တာနက်စာမျက်နှာထဲ အီးမေးတွေထဲ စီဘောက်တွေထဲမှာ ဘာသာရေးဆန့် ကျင်စော်
ကားမှုတွေကို ရေးသားမှုဟာ ပြဿနာဖန်တီးလိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူနေရာဖြစ်
နေလို့ဖတ်တဲ့သူတွေက ပိုသတိထားရပါမယ်။ မူလရေးသားသူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာ
ထုတ်ဖေါ်သိရှိဖို့ခက်ခဲသလိုဈ ဒီရေးသားမှုဟာ အလွယ်တကူ ပြန့် နှံ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်
ဖတ်မိသူတွေဟာ ကိုယ်ကိုတိုင်က ဒီလို ပြဿနာစာတွေ အရေးအသားတွေကို ထပ်မံဖြန်
့ဖြူးပေးနေသလို ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်၊ ဆင်ထားတဲ့ပြဿနာထဲ ကိုယ်ကိုတိုင် ပါဝင်လို့ပါဝင်မှန်း
မသိနဲ့ဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုတာ သတိထားကြဖို့သင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်အောင်၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်အောင်
ရေးသားနေတာ တွေ၊ ဘလော့တွေလုပ်နေတာတွေ၊ မေးလ်တွေ တွေ့နေရတာဟာ ဘယ်သူ
တွေလုပ်နေတာလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးက သိစေချင်တာပါ။ သံဃာ့ကိစ္စပေါ်တိုင်း အမြဲလက်
ရှောင်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယ အဖွဲ့ကို အာဏာရူးနအဖတွေက ဘာရည်ရွယ်
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက်တိုင်းမှာ စွမ်းရည်လည်းရှိ၊ ပညာလည်းပြည့်
တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ အဆက်မပြတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလူသားအရင်းမြစ်တွေကို အုပ်ချုပ်သူ
အဆက်ဆက်တို့ ညံ့ဖြင်းမှုကြောင့် တတိယ သံဃာယနာတင် ဥက္ကဋ္ဌ အရှင်မဟာ မောဂ္ဂလိပု
တ္တတိဿမထေရ်တို့လို ဘုရင့်သားတော် သမီးတော်တွေကို သာသနာ့ဘောင်မှာ တာဝန်ပေး
နိုင်သော၊ နိုင်ငံ၏ ပေါ်လစီတွေနဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးကို ဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်အောင် လုပ်နိုင်သော၊
အုပ်ချုပ်သူတို့ကို ဆုံးမနိုင်သော ဆရာတော်များ အခုချိန်ထိ မပေါ်ပေါက်သေးပါကြောင်း
ထို့ အတူ အထက်မှာ ဖေါ်ပြရေးသားချက်ပါ သတိမူ ဂရုစိုက်ကြရမယ့် အာဏာရူးတွေရဲ့ 
ပြည်သူတွေအပေါ် နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေကနေ အာရုံလွှဲရအောင်၊ ပြည်သူအချင်းချင်း
အဖွဲ့အစုအချင်းချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းဘာသာတရားတွေအချင်းချင်းသွေးထိုးဖန်တီးအကွက် ဆင်ထောက်ချောက်လုပ်တာတွေကို မည်သို့ သော ဆန့် ကျင်ပြောဆိုမှု ရေးသားမှုကိုမဆို
မစုံစမ်း မလေ့လာ ရင်းမြစ်ကို မရှာ အခြအနေအချိန်အကာကို မကြည့်ဘဲ မိမိတို့ ရဲ့ပကတိ
ရိုးသားသောခံစားမှုများဖြင့်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ကြမယ်ဒီလိုဘသာသာတရားစော်ကားမှု လူမျိုးရေးစော်ကားမှုတွကို အခြားသူ သိစေလိုတဲ့ စေတနာအရိုးခံနဲ့ဖြန့် ပေးကြမယ်ဆိုရင်
အမှိုက် စ ပြသာဒ်မီးလောင်ဆိုတာလို လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းကြီးတွေအထိ ဦးတည်သွားနိုင်
မယ့် လမ်းကြောင်းထဲ မိမိကိုယ်တိုင် ပါမှန်းမသိ ပါသွားနိုင်တာကို၊ လုပ်ကြံဖန်တီးသူတွေ
အကွက်ဆင်တဲ့ထဲ ၀င်သွားမှန်းမသိ ၀င်သွားနိုင်တာကို အထူးသတိထားကြပါလို့ ပြည်သူ
များအကျိုးကို ရှေ့ ထားပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရူးတွေ အုပ်ချူပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာသာမတူ
လူမျိုးမတူပေမယ့် တစ်နိုင်ငံထဲနေ တစ်ရေထဲသောက်ပြီး မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ မြန်မာနိုင်ကြီး
အတွက် အချင်းချင်း ပဋိပက္ခမဖြစ်ရကြလေအောင် အစစအရာရာမှာ ဆင်ခြင်သတိနဲ့ပိုမို
လက်တွဲစည်းလုံးကြဖို့၊ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်ဖြစ်နိုင်မယ့်လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်နိုင်မယ့် မင်္သကာဖွယ်ဖန်တီးမှုများကိုကာကွယ်တွန်းလှန်ကြဖို့ဖန်တီးသူတွေကိုရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ကြဖို့ အလွန်ပင်အရေးကြီးလှပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, January 21, 2010 Links to this post
ရွှေခမောက် စာစောင် အမှတ်(၁၀၈)
ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ကြေးနန်းလုပ်ငန်း(လထ/မန်နေဂျာ)၀န်ထမ်း များအားရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခြင်းအားမခံနိုင်သောကြောင့် ဝန်းထမ်းများ၏ ရင်ဖွင့်သံ.။
ပြီးစားရင်းမဲ့လက်မှတ်မထိုးဘဲမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း အမည်ဖြင့် ဘဏ်မှ လွဲ ပေးနေရခြင်း ကိုပြု
အဆိုပါ ရုံးခွဲမှ ၀န်ထမ်းများသည်လစဉ်၅၀၀၀၀ကျပ်ရရှိရန်အသည်းအသန်ကြိုးစားကာဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း
အမည်နှင့် လွဲရန်ဖိအားပေးခိုင်းစေခြင်း ကိုခံနေရပါသည်။ထို့ပြင်ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်ပြုက်သွားချင်
လားဟူသောချိန်းခြောက်စကားဖြင့် အလုပ်ထွက်ရန် ဖိအားပေးခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ထို့ပြင် တိုင်းမန်နေဂျာနှင့်ပူးပေါင်းကာ ပဲခူးမြို့တွင်းတွင် ကြေးနန်းစခန်းများဖွင့်ကာဖက်စ်ဖုန်း ထားပြီး
pco တင်ကာဝန်ထမ်းများကို မိသားစုအသုံးစရိတ်ရှာခိုင်းနေသည်ဟုလဲ ကြားသိရပါသည်။
ဒိုက်ဦး ၊ဖြူး၊ညောင်လေးပင်တို့မှ လစဉ်ပုံမှန်ငွေလွဲပေးနေရခြင်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ခွဲများမှတ
ဆင့် စုံစမ်းသိရှိနိုင်ပြီး ဌာနလက်အောက်ဝန်ထမ်းများမှ လည်း ခေါ်ယူစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းဖြင့်
အထက်ပါကိစ္စရပ်များကို ရုံးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်အဆင့်ဆင့်တင်ပြရန်သင့်မသင့် ကိုချင့်ချိန်ပြီး မိမိ
တို့၏ အလုပ်ခွင်ရေရှည်တည်တန့်ရေးကို ဦးစားပေးကာ ယခုလို အွန်လိုင်းမှ တဆင့်တင်ပြခြင်းဖြစ်
တရားဝင်တိုင်ကြားပါက လဲ အထက်လူကြီး များ မှ သေချာစစ်ပေးလျှင်တော်သေးသည်။မစစ်ပေးပါ
က တိုင်ကြားသူသာ ပြန်လည် သက်ရောက်မည်ဆိုးပါ သဖြင့်ဝန်ထမ်းများအား စာနာသော စိတ်ထား
ဖြင့် တင်ပြတောင်းဆို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ ကြေးနန်းလုပ်ငန်း (လထ/မန်နေဂျာ)က၀န်ထမ်းများအား ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံခြင်းအား မခံနိုင်သောကြောင့် ဝန်းထမ်းများ၏ ရင်ဖွင့်သံ.။
နအဖ စစ်တပ် နေ့တဓူဝ ဖိနှိပ်မှုပြုလုပ် ၊ သျှမ်းကျေးလက်လူထု နယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေး
မိုင်းနောင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်အတွင်း တပ်မ ၃၃ စစ်ကြောင်း ဖြတ်သန်းသွားလာလှုပ်ရှားရာ ကျေးရွာများမှ အိမ်ခြေ အနည်း အများအပေါ်မူတည်၍ ပေါ်တာဆင့်ခေါ်ခြင်း၊ အဓမ္မဖမ်းယူခြင်းတို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ၂-၃ ရက်က ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ထွက် ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် ရွာသားများ ၁၀၀ ကျော်နေပြီဟုလည်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါသည်။
ကျေးသီးမြို့နယ် မိုင်းကောဝ် ကျေးရွာအုပ်စု နောင်ဆွမ်းတ၀ိုက် အိမ်ခြေ ၃၀ ကျော်ရှိသည့် ရွာတရွာဆိုလျှင် တရက် အယောက် ၂၀ ပေါ်တာဆင့်ခေါ်ကြောင်း၊ အိမ်ခြေများသည့်ရွာ ပို၍ဆင့်ခေါ်ကြောင်း၊ မသွားနိုင်ပါက ၃ ရက် ၂ ည ခရီး ပေါ်တာငှားခ ကျပ် တသောင်းခွဲပေးရကြောင်း၊ နွားလှည်း၊ ထော်လာဂျီ တို့ပါ နေ့ညမနား အလှည့်ကျသွားရကြောင်း၊ လက်ရှိစစ်တပ်က ယခင် ကတည်းက ဖိနှိပ်မှုရှိနေသည့်အပြင် အသစ်ထပ်ရောက်လာသည့် စစ်ကြောင်းကြောင့်ပိုခံနေရ ကြောင်း အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က ဤကဲ့သို့ ဆက်ပြောပြပါသည်။
မဆလ မှ နအဖ သို့ ကာတွန်းတချို့.
နအဖနဲ့၂၀၁၀ ။
ပေးပို့ပေးသော က်ုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, January 20, 2010 Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ လွတ်မည် ရွေးကောက်ပွဲက ဒီနှစ်ထဲ မသေချာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ လွတ်မည် ရွေးကောက်ပွဲက ဒီနှစ်ထဲ မသေချာ(ရင်းမြစ်: ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မကြာခင် လွတ်မြောက်လာနိုင်မည် ဟု ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်နိုင်
ခြေရှိ သော် လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည် ဆိုခြင်းမှာ သေချာပြီ ဟု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာမည် ရွေးကောက်ပွဲကတော့
လိုအပ်လျှင် ရွှေ့ဆိုင်းမည် ဆိုသည့် သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Freedom News Group မှ
အမေရိကန် နိုင်ငံထုတ် Foreign Affairs မဂ္ဂဇင်း လစဉ် ဖတ် သော စစ်တပ်အရာရှိ ဗိုလ်မှုးကြီး
တစ်ဦးထံသို့ မေးမြန်းကြည့်ရာ “သူက (ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ) အဓိက ဘာလဲဆိုတော့ သူ
ခေါင်းချတဲ့ အချိန် ထိ စစ်တပ်က နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တာ ကို ပဲမြင်ချင်တဲ့ ပုံရှိတယ်၊Playing Game
နဲ့ ပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကို လွှတ်ပေးမယ်။
ပြီးရင်အခု မှ လွတ်လာ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဘယ်လိုလုပ် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်လို
့ရအုံးမှာ လဲ ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို နောက်ဆုတ်မယ်။ ဒေါ်စု သေသေချာချာ အချိန် ယူပြီး
ပြင်ဆင် နိုင်အောင် ပေါ့ ။နိုင်ငံတကာ ကို ပြောမယ်။ ကဲ …ဘယ်သူက ဘာပြောလို့ ရအုံး
မလဲ “ သူ၏ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပတ်သက် ၍ သုံးသပ်ချက် အား Freedom News Group
လတ်တလော တွင်လည်း ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ စစ်အစိုးရထံမှမည်
သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ ချက်များ မပြုလုပ်သလို ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်တရား ၀င်မဲ
ဆွယ်ခွင့် ရရှိသည့် ကြံဖွတ် နှင့် တစည ကဲ့သို့ အဖွဲ့ များက ပင် မည်သည့်အားတက် သရော
ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးမှ တွေ့ ရှိရခြင်း မရှိ ဟု ရန်ကုန်မြို့ ရှိ တတိယ အင်အားစု ၀င် တစ်ဦးက ပြော
စစ်အစိုးရ ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ထောက်ခံ သည့် တတိယ အင်အားစု ၀င် အချို့ မှာရွေးကောက်
ပွဲ ဥပဒေ ကို မထုတ်ပြန် သေး၍ မချင့်မရဲ ဖြစ်ကြသည် ဟု သတင်းရရှိသည်။ထိုကဲ့သို့ ရွေးကောက်
ပွဲအား ယခုနှစ်ထဲ တွင် ကျင်းပရန် စိတ်မပါ ခြင်းမှာ မကြာခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အီရန် ရွေးကောက်
ပွဲ ဂယက်ကြောင့် လပေါင်းများစွာ ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေး
လှုပ်ရှား တက်ကြွသူ တစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ အမည်မဖော်လိုသော အရာရှိ တစ်ဦးကမူစစ်တပ်က
တစ်သက်လုံး အချိန်ဆွဲ တည့် နည်းဗျူဟာ (Delaying Tactics)တွေ နဲ့ ကစားလာတာ ဘာမှ
ယုံလို့ မရဘူး ဟု ပြောသည်။
နအဖရောင်းစားလို့တိုင်းပြည်သယံဇာတပစ္စည်းတွေ ကုန်ပါပြီ။ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ဗီယက်နမ်က ဘုရားဆင်းတုတော် ထုလုပ်မယ်တဲ့။
နအဖဟာ အလေးချိန် (၃၅) တန် အလေးချိန်ရှိသည့် မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးကြီးအား
အမေရိကန်ငွေ ဒေါ်လာ (၂) သန်းဖြင့် ရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်းစားခဲ့တာကို
၀ယ်ယူခဲ့သူကနေ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျောက်စိမ်းဆင်းတုတော်ကြီး ထုလုပ်ဖို့ အတွက်
စီစဉ်မှသာ သိရှိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖထံကနေ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့သူကတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသား ကျောက်မျက်ရတနာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် Dao Trong Cuong ဆိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဒေါ်လာငွေ (၂) သန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလက မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို သယ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးကြီးကနေ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်အဖြစ် ထုလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း
သိရှိရပြီး၊ ကျောက်မျက်နှင့် ပန်းပုပညာရှင် (၅၀) ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ ကနေ ဘုရားဆင်းတုတော်အဖြစ်
ဒီကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးကြီးအား ဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့ အခမ်းအနားသို့ လူဦးရေ (၂၀၀၀) ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနားမှာ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ၀ယ်ယူခဲ့သူ Mr Cuong က ဒီကျောက်စိမ်းတုံးကနေ ထုလုပ်မယ့် ကျောက်စိမ်းဘုရားဆင်းတုတော်ဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခံရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းရိုင်းတုံးကြီးဟာ အမြင့်ပေ (၁၀)
ပေ (၃ မီတာ) မြင့်ပြီး အလျား (၆.၅) ပေ (၂ မီတာ) ရှည်လျားပြီး အနံ (၆.၅) ပေ (၂ မီတာ) ရှိတယ်
လို့သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ၀ယ်ယူခဲ့ပြီး ရရှိလာတဲ့ ဒီကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့ အခမ်းအနားကို
ဗီယက်နမ် သမ္မတ Nguyen Minh Triet ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့သလို Thich Pho Tue (he
patriarch of the Vietnamese Buddhist Sangha) ဦးဆောင်တဲ့ သံဃာ (၂၅၀) ခန့်ကလည်း ခေါင်းလောင်းများတီးကာ တရားများ ရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကနေ ဘုရားဆင်းတုတော်အဖြစ် ထုလုပ်ဖို့ အတွက် အချိန်ကာလအား
ဖြင့် (၂) လောက်ကြာမှာဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ အလေးချိန် တန် (၃၅) တန်လေးတဲ့ ဒီမြန်မာ့ကျောက်စိမ်း
တုံးကြီးကနေ ထုလုပ်မယ့် ကျောက်စိမ်းဘုရားဆင်းတုတော်ဟာ အလေးချိန် တန် (၂၀) ခန့်ရှိနိုင်
မယ်လို့ခန့် မှန်းထားပါတယ်။
အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ၀ယ်ယူခဲ့သူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသား
Mr Cuong နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်စရာ ဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျှော်အမြင်နည်းပါးလှစွာနဲ့တိုင်းပြည်ကို မတရားအုပ်ချူပ်ရုံတင်မ
ဘောထားပြီး ရောင်းချချင်သလို ရောင်းချနေတဲ့ နအဖသူခိုးကြီးတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချခွင့်မရဘဲ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဂုဏ်မြင့်မား
နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးလက်လွှတ်ရတာပါဘဲ။
နိုင်ငံပိုင် ပြည်သူပိုင် တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ဒီလို ကျောက်မျက်ရတနာ သယံဇာတတွေကို မြေပေါ်မြေအောက်မကျန် ရောင်းစားနေကြတဲ့ နအဖတွေဟာ သူခိုးကြီးတွေပါဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို အခြားနိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး
က ၀ယ်ယူပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်း ဘုရားဆင်းတုတော် ပြုလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ဘယ်လို မျက်နှာပြကြရမလည်း။
တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူမျိုးဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းအောင် နအဖဟာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဒေါ်လာငွေရရင်ပြီးရော မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း လုပ်ရက်ခြင်းပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ ဘုရားတည် လမ်းဖောက် တံတားဆောက်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ့ တွေဆီ
အလှူဆိုပြီး အဓမ္မငွေညှစ် လုပ်အားပေးခိုင်းနဲ့နအဖကတော့ နောက်ဆုံးကျမှ ဖွင့်ပွဲလေးလုပ်ပြီး နာမည်ကောင်းလေး ၀င်ခံလိုက်တာဘဲ ရှိတယ်။ ဘယ်မှာလည်း တန်ဖိုးကြီးမားလှတဲ့ သယံဇာတ
တွေနဲ့အရင်းပြုပြီး တည်ဆောက်တာတွေ ဘယ်မှာလည်း ဒီသယံဇာတွေကို ရောင်းလို့ ရတဲ့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသော ငွေတွေနဲ့တည်ဆောက်တာတွေ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဒီလိုသယံဇာတတွေကို ပြည်သူတွေ မသိအောင် တိတ်တိတ်ပုန်း ခိုးရောင်းနေလည်းဆိုတာ ဘယ်လောက်တောင် ရှိပြီလည်း။ တိုင်းပြည်ရဲ့သဘာဝကပေးတဲ့ သယံဇာတပစ္စည်းတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမှန်းမသိဘဲ ခိုးလို့ ရတာ အကုန်ခိုးပြီး ရောင်း
လို့ ရတာ အကုန်ရောင်းထုတ်နေတဲ့ နအဖကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကတော့ ငတ်ပြတ်
ဆင်းရဲ သေကြေနေရပြီး၊ နအဖသူခိုးမိသားစုကြီးတွေကတော့ ခိုးလို့ ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ 
ဦးနှောက်အသိဥာဏ် နည်းပါးလှတဲ့၊ အရည်အချင်းမဲ့ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ နအဖတွေကြောင့် တန်ဖိုးမဖြတ်
နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းတွေဟာ နောက်ဆုံး အခြားနိုင်ငံတွေ အခြားနိုင်ငံခြား
သားတွေ တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချဖို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘ၀ကတော့ ဆန်ထွက်တဲ့နိုင်ငံ ထမင်းငတ်နေရ၊ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နဲ့ရေပေါတဲ့နိုင်ငံ သောက်သုံးရေ ရှားနေရ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နဲ့ ရေနံပေါများတဲ့နိုင်ငံ အလင်းရောင်မဲ့
အမှောင်ထဲ နေရ၊ သယံဇာတပေါများကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲမွဲတေနေ
ရ ဖြစ်နေရတာ တရားခံကတော့ အာဏာရူး သူခိုးကြီးတွေကြောင့်ပါဘဲ။
ထိုင်းနိုင်ငံ နို့ဘို့ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ယနေ့ ဒုက္ခသည်များ၏စိတ်ဖိစည်းမှု များကို UNHCR မှတာဝန်ရှိသူအား ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ဖော်ထုတ်ပြသကြခြင်း..။
ယနေ့(၁၉၊ ၁၊ ၂၀၁၀) ရက်နေ့ နေလည် (၁) နာရီခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်း စခန်းရုံး
ဘေးမှ UNHCR ရုံးရှေ့တွင် တတိယနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာခွင့် မရသေးဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်နေကြ
ယနိုင်ငံထွက်ခွာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြန့်ကြာစွာ စောင့်ဆိုင်းနေကြရသော မြန်မာဒုက္ခသည်များမှ ဆန္ဒ
သတင်းရရှိသည့် အချိန် (၂) နာရီ (၄၀) မိနစ်အထိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
UNHCR တာဝန်ရှိသူ ဘရာရမ်မှ ဒုက္ခသည်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးနေသော်
လျက်ရှိသော သူများကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဆိုင်းငံထားလျက်ရှိပါသည်.။
OPE,DHS တွင် အင်တာဗျူး ကိုပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို လုပ်ကိုင်နေကြသော
ကိုင်နေကြသည့်ဒုက္ခသည်အတုအယောင်များကိုကျတော့လွတ်လပ်စွာ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်.။
ယခုတွင်နို့ဘုိုးဒုက္ခသည်စခန်း၌ရီချက်များဖြစ်သော ကျောင်းသားတပ်မတော် မှABSDF မှကျောင်းသား
များမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များကို ကျခံခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကျတော့
ဟိုးခေါ်ဆိုင်းငံခြင်းကိုခံထားရသည့် ဒုက္ခသည် များသာကျန်ရှိခဲ့ပါသည် ထိုသို့ပြုလုပ်မှုတွေ ကိုလုပ်ခံရ
ကိုယ့်အမိမြန်မာပြည်တွင် ထိုသူများအနေဖြင့် ပြန်လည်ပြီးအပို့ခံရခြင်းများကိုပြုလုပ်မည်ဟု UNHCR
သောအခါUNHCRမှတာဝန်ရှိလူကြီးက သူတို့သတိမထားမိတာ ဖြစ်သည်ဟုပြောပြန်သည်.။
သည်.။ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းနေနေရသည့်စိတ်သောကဖိစီးမှုများကို နေ့တိုင်းခံစားနေရသဖြင့် ယခု
လိုUNHCRအား သူတို့၏မျှော်လင့်ချက် များ၊အသက်ရှင်ခွင့်များကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု
ပေးပါရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ သူတို့၏ စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.။
ရှင်းပေးလျှက် ရှိနေကြောင်းနှင့် အဆိုပါ မြန်မာဒုက္ခသည်များ ဆန္ဒပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်
အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှ ဆိုင်ဖုန်းဖြစ်ပြီး ကိုလှအေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြမှုတွင်ပါဝင်
သူတဦးဦးကို ခေါ်ပေးပါရန် ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ယခုထပ်မံသိရှိရသော သတင်းအရ အဆိုပါဖုန်းများကို အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားကြောင်း သိရှိရပါ
ဤသို့ မြန်မာတွေ ဒုက္ခသည် ဘဝသို့ရောက်ရခြင်းမှ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယနေ့ အုပ်ချုပ်နေသော မင်းဆိုးမင်းညစ် စစ်အစိုးရ နအဖ တွေကြောင့် သာမြန်မာလူမျိုးများဟာဒုက္ခသည် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.။နအဖ ၏လုပ်ရပ် များကြောင့် ပြည်သူလူထုတွေဟာ အမိနိုင်ငံ
မှာ မနေနိုင်တော့ဘဲ အမိနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်းရင်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့သာ ထွက်ပေါက်
ဟင့်အင်း ကို ကျော်ဖြတ် ခြင်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, January 19, 2010 Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်မှ တိုးချဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်သစ် (၉) ဦး၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း။
Biography of new CEC members of NLD
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခရမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ် နှစ်လည်ဆွမ်းကျွေး ကျင်းပ
အင်န်အယ်ဒီ - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ခရမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၉ နှစ်ပြည့် နှစ်လည်ဆွမ်းကျွေးအခမ်းအနားကို အမှတ် ၁၇၊ ဗိုလ်ဉာဏလမ်း၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်မှာ ယနေ့ နံနက်က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဦးတင်မောင်ဝင်းကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၂ (၁၉၄၀) တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၁၀ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးခရမ်းမြို့ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်း အထက၊ ရေကျော် မက်စဒစ်နဲ့ မြို့မအမျိုးသားကျောင်းတို့မှာ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၅၇ - ၁၉၅၈ - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်သင်ကြားပါတယ်။ ခရမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး၊ တက္ကသိုလ်ခရမ်းမြို့နယ်အသင်း၊ ဟံသာဝတီခရိုင်အသင်း၊ ကလောင်ရှင်အသင်း၊ သဟာယနှင့် စာဖတ်အသင်းတို့မှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တကသအဖွဲ့ဝင်၊ ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦး တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုးနှင့် သဘာဝတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်မှုတိုက်ပွဲကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၃ မှ ၁၉၇၀ အထိ လုံခြုံရေးပုဒ်မ ၅ နဲ့ အထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကာလမှာ စစ်ပြီးခေတ်နှင့် လွတ်လပ်ရေးခေတ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၀င်ဟောင်းများ ကော်မတီမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာ အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြဟစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲမှာ ခရမ်းမြို့နယ် အမှတ်၂မဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အကိုအရင်းဖြစ်သူ (မဆလပါတီဝင်လူဟောင်း) တစညပါတီကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်း (အငြိ်မ်းစားဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်း)နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံရာတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဦးတင်မောင်ဝင်းဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုကြောင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ရက်နေ့တွင်စစ်အစိုးရ၏အကျဉ်းစခန်းတွင် သူရဲကောင်းပီသစွာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ဇနီး ဒေါ်ကြူ (စာရေးဆရာမ ခင်လှိုင်ကြိူ) နဲ့ သမီးတယောက်၊ သားတယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အမေရိကန် ပညာရှင်နှင့်တွေ့ဆုံ
“သူက အင်ဒိုနီးရှားကို အထူးပြု လေ့လာနေတယ်လို့ ပြောတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဖွံဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အလားအလာ အလွန် ကောင်းနေပါတယ်၊ အလားအလာ ရှိရဲ့သားနဲ့ အခြေအနေက အဲဒီလို မဖြစ်လာဘူးပေါ့ဗျာ၊ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ သူ စိတ်ဝင်စားတယ်” ဟု
သုတေသနပြုလုပ်ရန်အတွက် မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်ခြင်းကြောင်း၊ အကျယ်ချုပ်ကျနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု သတင်းတချို့ ထွက်ပေါ်နေကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ပါမောက္ခ ဂျက်ဆင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပါမောက္ခ ဂျက်ဆင်သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ၏ အကြံပေးအရာရှိတဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ အမေရိကန် ဒု သမ္မတ၏ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အကြံပေးအရာရှိ၊ ၁၉၈၆မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ အရှေ့အာရှ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တွင် လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူး စသည့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံ မကြာခင် စီရင်ချက် ချမည်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, January 18, 2010 Links to this post
အိတ်ပေါက်ဖြင့် ဖားကောက်နေသော စစ်သည်တို့၏ နေ့စဉ်သက်သာချောင်ချိရေး.
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်ရက်ကို မကြေညာရဲတဲ့ နအဖ
မြန်မာပြည်သား ဒုက္ခသည်များ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်း တွင်နေနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်ဘဝ..။
မြစ်ချောင်းရေများ စီးဆင်းသလို တသွင်သွင် စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်များက ချောမွေ့ လှတဲ့ သူမ ပါးပြင်နဲ့ မလိုက်အောင် နာကျင် ခါးသီးမှုများနဲ့အတူ အတားအဆီး ကင်းမဲ့စွာ တရှိန်ထိုး ဖြိုဖြိုဖြိုက်ဖြိုက် သွန်ချလာတဲ့ မျက်ရည်စက်များကို ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ ငြင်သာစွာ သုပ်ဖယ်လိုက်ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ငိုသံနဲ့အတူ ကွဲအက်နေသော အသံနဲ့ စကားလုံးတွေက ထွက်ကျလာပါတယ် “တခါတလေကျတော့ ပြန်စဉ်းစားလည်း မကောင်းဘူး စိတ်အခက်အခဲဖြစ်တယ် ပြောရင်လည်း မကောင်းဘူး”
အဲဒီလိုပြောပြီးငိုနေတဲ့ သူက အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိတဲ့ ခလေး ၂ ယောက်အမေ ပိုလေးနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခ္ခသည် လူသစ်တွေ နေထိုင်ဖို့ ဝါးနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားပေးတဲ့ ဘားတိုက် တန်းလျားအရှည်ကြီးမှာ သူမက အခန်းကျဉ်းလေး တခုရဲ့ရှေ့ လှေခါးထစ်မှာ ထိုင်ပြီး ဦးတည်ရာမဲ့နေသော မျက်ဝန်းတစုံက အဝေးတနေရာကို ငေးမျှော်နေရင်း အတွေးဝင်္ကင်္ပါထဲက နစ်မျှောနေတဲ့ သူမရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့် ခက်ခဲသလို ဘာတွေ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာ သူမကိုယ်တိုင်တောင်မှ သိမယ် မထင်ဘူး။
“ပြန်စဉ်းစားမိတာ တကယ်ဝမ်းလည်း ဝမ်းနည်းတယ် တွေးရင် ခေါင်းကိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာနိုင်အောင် ကျမ ကြိုးစားနေမယ် မေ့ပစ်ချင်တယ်” လို့ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို သူမ ရင်နာနာနဲ့ ပြန်လည်ပြောပြပါတယ်။
သူပုန်နဲ့ ဆက်သွယ်တယ်လို့ အစွပ်စွဲခံရတဲ့ ပိုလေးနာက မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်မ ၅၄၄ ဗိုလ်မှူး တယောက်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် ကရင်နီပြည်အမှတ် (၁) ခရိုင်အတွင်းမှ ရှိတဲ့ ဟိုမန်း ရွာကို စွန့်ပြီး အမှတ် (၂) ကရင်နီဒုက္ခ္ခသည် စခန်းကို ယခုလ ၂ ရက်နေ့မှာ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။
“သူကျမကို သေနတ်တိုနဲ့ပေါ့နော် သေနတ်တိုနဲ့ ကျမကို ပစ်သတ်မှာပေါ့၊ ဒီကရင်နီ ဗိုလ်မှူးဘယ်သူလဲ မင်းဖော်ရမယ် သူတို့ဘယ်လမ်း ခရီးနဲ့ သွားလာလဲ ငါ့ဖော်ရမယ်” လို့တုန်ယင်နေတဲ့ အသံတွေနဲ့ သူမ ပြောပြပါတယ်။
အဲဒီ ဗိုလ်မှူးက သူမ့အိမ်ကို လာပြီး ဒီလိုမျိုး ခြိမ်းခြောက် တာ ၃ခါ ရှိပါပြီ။ မိန်းမသား တယောက်အနေနဲ့ ခံနိုင်ရည် ဘယ်လိုရှိနိုင်ပါ့မလဲ။ သူမက ဘယ်သူနဲ့မှ အဆက်အသွယ် မရှိပါဘူး၊ အိမ်ကို ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကလည်း တခါတလေမှ လာတတ်တဲ့ ကလလတ (ကရင်နီ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး) အဖွဲ့တွေနဲ့ အင်ဥ၊ ဖွတ်၊ လိပ် ရှာထွက်ကြတဲ့ နားမန်းဘက် က ရွာသူရွာသားတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“နင်မသိဘူးဆို မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ နောက်ရက်ကျရင် မနက်ဖြန်နောက်တရက်ပဲကျန်မယ် မေးတဲ့ချိန်မှာ မင်းဖြေရမယ်တဲ့ မဖြေလို့မရဘူးတဲ့ မဖြေရင်ကျနော်နဲ့နင်နဲ့ တွေ့မယ်တဲ့” ကျမလည်း စဉ်းစားပြီး ဒီမှာနေရင် သေမှာပဲဆိုမှ ကလေးကိုခေါ်ပြီး ထွက်လာလိုက်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
ကရင်နီပြည်အမှတ်(၂)ခရိုင်၊ ကဝေါ်ထာရွာမှာ နေတဲ့ အသက်(၃၅)အရွယ်ရှိ စောလွဲမူးဒိုကလည်း စစ်အစိုးရက စစ်သားတွေ ရွာထဲဝင်လာလို့ ပြေးလွှားနေရတယ်လို့ ယခုလိုပြောပြပါတယ်။
“သူတို့တွေလာပြီး သူတို့နောက်လိုက်ဖို့ ပေါ်တာ ခေါ်လိုက် နောက်နင့်ကို အမျိုးမျိုးကြောက်အောင်လုပ်တယ် တခါတလေနေရတယ် တခါတလေ ထွက်ပြေးရတယ် အဲလိုတွေလုပ်တယ်” အရင်တုန်းကလမ်းမှာ တွေ့တိုင်း သတ်ပေမဲ့ အခုဆိုပေါ်တာ ခေါ်ပြီးတော့ အနှောက်အယှက်ပေးတာ တော်တော် ဆိုးတဲ့အတွက် ရွာကနေ ထွက်ခွာလာရတာ ဖြစ်တယ်လို့ စောလွဲမူးဒိုက ပြောပါတယ်။
အမှတ်(၂)ခရိုင်၊ ကော်ရီခီးကနေ အသက်(၃၀)အရွယ်ရှိ် နော်ရီဘက်ခါ ကလည်းသူမရဲ့အတွေ့အကြုံကို အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“စစ်သားတွေတက်တယ် အဲလိုမျိုးပြေးလွားရတယ်ပေါ့ အဲဒါသူတို့တက်မယ်ဆို လူကြီးတွေတွေ့တယ် အဲမျိုးလာပြောပြခါကျ တော့ သွားပုန်းနေရတယ်”
ဒုက္ခကြားက ဒုက္ခ္ခရောက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကို မစာနာပဲ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲသွင်းတတ်တဲ့ စစ်အစိုးရ ဟာ “စစ်အစိုးရ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး နာမ ကို ကြားမိလိုက်တာနဲ့ ရွာသူရွာသားများ အားလုံးလိုလိုက သရဲတစ္ဆေ္ဆကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်ရသလို ထိတ်လန့်သွားပြီး သွေးမရှိတော့တဲ့ မျက်နှာမျိုးနဲ့ ခါးသီးနာကျင်မုန်းတီးနေတဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်တွေ သွေးသားတွေထဲမှာ ဘယ်တော့မှ ဖျောက်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကရင်နီပြည်တွင်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ လယ်ယာမြေယာတွေကို ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြရပါတယ်။ တရက်စာတရက်စာ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရှာဖွေစုဆောင်းရတဲ့အစားအစာတွေကို စစ်တပ်တွေကမစာနာဘဲ အတင်းတောင်းယူစားကြတယ်လို့ ပိုလေးနာကပြောပါတယ်။
သေနတ်တကားကားကိုင်ပြီး “လာတောင်းစားရင် ကိုယ်က မပေးလည်း မကောင်းဘူး ကျမပေးလိုက်တယ်” လို့ပိုလေးနာကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်တွေက အစားအစာများရတဲ့အခါကြတော့လည်း “မင်းတို့ကို ငါကြောက်တယ်လို့ ထင်လား ငါမကြောက်ဘူး ကြောက်ရင် ဘယ်တော့မှ ရဲဘော်မလုပ်ဘူး” လို့ ပြောပြီး ရွာသူရွာသား ရှေ့မှောက်မှာ သေနတ်ဖောက်ဖောက်သွားပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလုပ်သွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒါတွေကြောင့် ရွာသူရွာသားတွေက စစ်တပ်နဲ့ဝေးတဲ့ တောတွေထဲမှာ ပုန်းအောင်းနေထိုင်ကြရပါတယ်။ အချို့ဆိုရင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဘက်ကို ထွက်ပြေးလာကြပါတယ်။
အခုဆို မယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်က ဒုက္ခ္ခသည်စခန်းအဖြစ် ယာယီ နေထိုင်ရတဲ့ ကရင်နီ ဒုက္ခ္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုရင် လူသစ်ဦးရေတွေ တနေ့ထက်တနေ့ တိုးလာပြီး အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝင်လာမဆဲ တသဲသဲပါပဲ။
တချို့က စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုကြောင့်၊ တချို့ကတော့ ပညာရေးကြောင့်နဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝဖူလုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့်က စစ်သားတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှု စစ်သားတွေရဲ့ ခြေဖဝါးအောက်မှာ ရက်စက်မှု မတရား လုပ်ကြံမှုတွေ လုံးဝခံနိုင်ရည် မရှိတော့တဲ့ အဆုံး ဒီစခန်းကို ရောက်လာကြတာ များပါတယ်။
“အဓိက နအဖရဲ့ နှိပ်စက်မှုပေါ့ တချို့မိသားစုတွေက စားဝတ်နေရေးနဲ့ အဲဒီ ကျန်းမာရေးတို့ ပညာရေးတို့ အခက်အခဲပေါ့ ဒီဖက်ထွက်လာ ကြတယ်” လို့ စခန်း၂ က စခန်း အုပ်ချုပ်ရေးကော်မီတီ အတွင်းရေးမှူး ၂ လားဒိုထူး ကပြောပါတယ်။
စခန်း၂ မှာ ဆိုရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းထဲမှာပဲ လူသစ်တွေက ၂၉၃ ယောက် ရောက်ရှိလာပြီး စခန်း၁ မှာဆို ယခုနှစ် မတ်လအထိ ၁၀၄၉ ယောက်ရှိပြီး မတ်လ ၄ ရက် နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ၄၀၂ ယောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
စခန်း ၁ မှာများသောအားဖြင့် ကရင်နီပြည်ရှားတောတဝိုက်မှ လာကြတာဖြစ်ပြီး စခန်း ၂ မှာ ကတော့ ကရင်နီပြည်အမှတ်(၂) ခရိုင်အတွင်းမှ ဘူးကို၊ ကွားခီး ၊ ဂူဂေါ်ပေါ်၊ ဖောဘူးခိုနဲ့ ရွာဒဂါးရွာများမှထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း DKBA နဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကေအဲန်ယူကို စစ်ပွဲဆင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သော ကိုယ့်နယ်မြေ၊ အိုးအိမ်ကို စွန့်ခွာပြီး ၄၀၀၀ ကျော်ခန့် တာခ့်ခရိုင်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း (၃)ခုမှာ ယာယီခိုလှုံ နေကြရတယ်။
တချို့က နှစ်ရက်သာ ဖွားထားတဲ့ ကလေးလေးကို ချီပိုးပြီး နေပူ၊မိုးရွာတွေထဲမှာ လျှောက်လှမ်းနေရတာ အမှန်ဆို မီးတွင်း မှာနေရမဲ့ အချိန်ပါ။ ဗိုက်ကြီးသည်တွေ၊ ကလေးတွေ ၊ မသန်မစွမ်း၊ ကိုယ့် အဖိုးအဖွားလောက်ရှိတဲ့အရွယ် စသည့်..စသည့် လူက အခုဆို ဒုက္ခ္ခ တွေ ဘယ်လောက်ခံနေရပြီလဲဆိုတာ ပြောတောင် မပြော လိုက်ချင်တော့ပါဘူး။
သူတို့လေးတွေကဘဝကို သုညကနေ ပြန်စကြရတော့မယ် ။အဲဒါဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ လက်ချက်ကြောင့် ၊ စစ်အစိုးရက နယ်မြေကနေ မောင်းထုတ် မှုကြောင့်လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး။
အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခ္ခသည် လူသစ်တွေအတွက် စခန်းထဲမှာ အပြည့်အဝ အားမခံချက် မပေးနိုင်ဘူး လို့ ကရင်နီဒုက္ခသည်အမှတ်(၁) စခန်းက စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးကော်မီတီ ဥက္က္ကဌကပြောပါတယ်။
“ကျမတို့က ပံ့ပိုးတဲ့ အပိုင်းမှာပဲ လုပ်ပေးနိုင်တယ်၊ သူတို့ကို ဒုက္ခ္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့က ဒေသအာဏာပိုင်တွေဖက်က လိုတယ်” လို့ဥက္ကဌကပြောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘေးဒုက္ခ္ခတွေကို မခံလိုတဲ့ အတွက် ထွက်လာကြတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက လူသားချင်းစာနာတဲ့ အနေနဲ့ ယာယီခိုလှုံခွင့်ပေးထားခဲ့တာကို ရွာသူရွာသားတွေက ကျေးဇူးတင်မဆုံး ဖြစ်နေကြပါတယ်။
“ထိုင်းအာဏာပိုင်က နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျမထိုင်းအာဏာပိုင်ရော ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိခဲ့ပါတယ်”လို့ ယခုလ ၂၀ရက်နေ့မှာ အမှတ်(၁)ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘ္ဘာ့ ဒုက္ခ္ခသည်များနေ့မှာ စခန်း ၁ ကော်မတီဥက္က္ကဌက ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။
စခန်း၁ မှာ နှစ်၂၀ လောက် အကြာကြီး လာရောက် ခိုလှုံနေသော မခူဖောက သူ့မရဲ့ ခံစားချက်ကို ယခုလိုထုတ်ဖော်ပြပါတယ်။
“အရမ်းကို ဝမ်းနည်းတယ် ကျမတို့ ရေမြေတွေ အိမ်တွေ ရှိရက်သားနဲ့ ဒီလို ထွက်ပြေးလာပြီး ဒုက္ခ္ခသည်အဖြစ် လာနေရတာ “ဗမာ” စစ်အစိုးရတွေရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေ မခံနိုင်လို့ ကျမတို့ ဒုက္ခ္ခသည်တွေ လာနေရတယ် တကယ်ဆို ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာပဲ နေချင်တယ်”
သူကဆက်လက်ပြီး “ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်နေချင်တယ် အစိုးရတွေက မကောင်းလို့ ကျမတို့ပြန်ရင်လည်း ကျမတို့ပဲ ဒုက္ခ တွေ့ရတယ်”
ဥပဒေအကြောင်းလေ့လာဆည်းပူးနေတဲ့ ကရင်နီဒုက္ခသည်ကျောင်းသားတဦးက “ဒုက္ခ္ခသည်မှာ လာနေတာ အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အရာတွေကိုပြန်လည်ရစေဖို့အတွက် အားတင်းထား ပြီးတော့ နေရမယ်” လို့ ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည်ကို ပြန်နေရနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် လို့ပြောပါတယ်။
ကိုယ့်နယ်မြေကို မပြန်ရပဲ ဒီစခန်းထဲကိုပဲနေရမယ့်အတူတူ ဘဝလုံခြုံမှုပိုမိုအာမခံချက်ရှိတဲ့ တတိယနိုင်ငံကို တဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာနေကြပါတယ်။
ဘယ်သူက ဒီလိုဒုက္ခ နွံအိုင် တွေထဲမှာ နှစ်ပေါင်းဆယ်နှင့်ချီပြီး ဘဝကိုအနှစ်မြုပ်ခံ နေနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီလို ဒုက္ခ တွေထဲက နောက် ဝတ်ကြွေး ရှိရင်ကြေပါစေတော့ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ဒုက္ခ္ခသည်ယောက်တိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေကြမှာ သေချာပါတယ်။
“တတိယ နိုင်ငံထွက်ခွာချင် လို့ ဒုက္ခ္ခသည်လာဖြစ်နေတာ ဆိုတာ မရှိဘူး ” လို့ စခန်းဥက္က္ကဌ ကပြောပါတယ်။
စခန်းထဲမှာ ဒုက္ခ္ခသည်လို့ အမည်ရှိပေမဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး နှင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာက လိုလေသေးမရှိအောင် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေး နေပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဒုက္ခ္ခသည် ဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူများတွေက ကျနော်တို့ကို အထီးကျန်အဖြစ် မချန်ထားဘူး နိုင်ငံတကာတွေက ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်” လို့ စခန်း ၂ အုပ်ချုပ်ရေးမှ စခန်း ကော်မတီ ဥက္က္ကဌ က ကမ္ဘ္ဘာ့ ဒုက္ခ္ခသည်များနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ထိုနည်းအတူ UNHCR ကိုယ်စားလှယ် တယောက်က “ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကမ္ဘ္ဘာကနေပြီးတော့ ကျမတို့ရဲ့ ဒုက္ခ္ခသည်များ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သတိရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်”
စခန်း ၁ အုပ်ချုပ်ရေးကို တာဝန်ယူထားတဲ့ပလာအသစ်တယောက်ကလည်း “ ဒီလိုအခမ်းအနားတရပ်ကို ကျင်းပလိုက်တာဆိုတော့ နိုင်ငံတကာကို ကြော်ညာလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေတာလဲ ဘာအခက်ခဲကြောင့် ဒီကိုရောက်နေတာလဲ ဆိုတာကို ကမ္ဘ္ဘာကို ကြော်ညာလိုက်တာနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို အကြောင်းကြားလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ”
ဒုက္ခ္ခသည်များဟာ အစားအသောက်အတွက် အလှူရှင်များက သနားစာနာပြီး ပေးကမ်းကြတဲ့အစားအသောက်များကို လောက်ငှအောင် စားသောက်နေရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ဒုက္ခ္ခသည်တယောက်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုဟာ လွယ်ကူမယ်လို့
မထင်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုတွေ ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စတဲ့ ထိခိုက်မှုတွေ များစွာ ခံစားနေရပါတယ်။
ဘယ်သူမဆို “ဒုက္ခ္ခ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ စကားလုံးကို သေမတတ်ကြောက်နေတတ်ကြပါတယ်။ မရှောင်လွဲနိုင်လို့သာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုလေးနာလိုပြည်တွင်းက ရွာပုန်းရွာရှောင်တွေအတွက်ကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းဟာ အနည်းဆုံးတော့ အသက်အန္တာရယ်ကင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကမ္ဘာငယ်လေးတခုမဟုတ်လား…
လူသစ်တန်းလျားရဲ့အခန်းကျဉ်းလေးတခုမှာ ထိုင်နေတဲ့ ပိုလေးနာတယောက် သူမပါးပြင်ပေါ်က မရပ်မနား တသွင်သွင်ကျနေတဲ့ မျက်ရည်စက်တွေနဲ့အတူ “ကျမတော့ ဒီမှာရောက်တာ စိတ်ချမ်းသာတယ်” လို့ပြောချလိုက်ပါတော့တယ်…
ဤဆောင်းပါးကို ဇွန်လ(၂၀)ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များနေ့အတွက် အမှတ်တရ ရေးသားသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, January 17, 2010 Links to this post
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ယနေ့ မနက် (၆) နာရီ (၄၀) မိနစ်ခန် ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နေအိမ် ပြင်ဆင...
ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဘလော့တွေ၊ေ...
နအဖ စစ်တပ် နေ့တဓူဝ ဖိနှိပ်မှုပြုလုပ် ၊ သျှမ်းကျေးလ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ လွတ်မည် ရွေးကောက်ပွဲက ဒီနှစ...
နအဖရောင်းစားလို့တိုင်းပြည်သယံဇာတပစ္စည်းတွေ ကုန်ပါ...
ထိုင်းနိုင်ငံ နို့ဘို့ဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ယနေ့ ဒုက္ခသ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်မှ တိုးချဲ့ တာဝန်ပေး...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အမေရိကန် ပညာရှင်နှ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံ မကြာခင် စ...
အိတ်ပေါက်ဖြင့် ဖားကောက်နေသော စစ်သည်တို့၏ နေ့စဉ်သက်...
မြန်မာပြည်သား ဒုက္ခသည်များ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန...
ဆရာမ နှင်းပန်းအိမ် ရဲ့ မျက်ရည်မိုး ...၊
ထိုင်းနိုင်ငံ နို့ဘိုးဒုက္ခသည် စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ ...
နိုင်ငံခြားသားများ မဲပေးခွင့်ရရှိရန် ဂျပန်အစိုးရမှ...
ဘဝ ကိုဘယ်တော့ မှအရှုံး မပေးဘူးဆိုတဲ့ လူတွေ ကိုလေးစာ...
မှားယွင်းမှု တစ်ခု၏ အလျားနှင့် အနံ ..
မြန်မာပြည် ကဘဝ တွေကိုပုံဖော်ပြတဲ့ ကာတွန်းများ.။